Boostada iyo Boorashka Mooska oo leh Labeen Almond | Cuntooyinka Jikada
Mooska boorashka boorashka leh kareemka yicib
Maria vazquez | 04/09/2021 10:00 | Cunnooyinka fudud
Waad ogtahay sida aan u jeclahay boorash, oo sidoo kale loo yaqaan boorash. Inta lagu jiro xagaaga badiyaa waxaan ku beddelaa kuwo kale, laakiin bisha Sebtember iyadoo ku soo noqoshada caadiga ah waxay ku soo noqdaan xiddigtayda quraacdayda. Shalay waxaan diyaariyey tan boorashka boorashka iyo mooska leh kareemka yicib in aan maanta kuu soo jeedinayo.
Boorashku waa bedel dhaqameed iyo aad u qalbi qaboojinaya waqtigaan sanadka, marka subaxdii iyo habeenkii bilaabaan inay qabow noqdaan. Waxa kale oo ay kaa buuxinayaan tamar si aad u waajahdo dhammaan kuwa subaxdu kugu soo tuurto. Cuntada aan maanta soo jeedinayo waa midda ugu fudud, laakiin taas kuma xiiso badna.
Aad u fudud in la diyaariyo. Boorashka boorashka iyo mooska leh kareemka yicib wuxuu u baahan doonaa wax yar oo ka badan isku darka iyo kululaynta. 10 daqiiqo gudahood waxaad diyaarin doontaa baaquli boorash oo aad sidoo kale ku dari karto dhammaan waxyaabaha aad rabto. Waan jeclahay isku -darka mooska iyo shukulaatada laakiin waad u beddeli kartaa mid kale.
Boorashkan Mooska Boostada oo leh Kareem Almond waa bedel quraac oo aad u fiican. Si fudud, dhakhso badan oo aad u raaxo badan.
Waqtiga karinta: 8 m
Wadarta waqtiga: 13 m
3 qaado oo deeqsinimo leh oat la duubay
150-200 ml cabitaan yicib ah
1 moos bislaaday.
½ qaado oo ah kareemka yicib
Shukulaatada shukulaatada (si loo qurxiyo)
Qorfe (si aad u qurxiso)
Waxaan ku dhex qasnaa digsi 3 qaado oo ah miro duuban, 150 ml oo cabitaan yicib ah, ana moos bislaaday oo la shiiday iyo ½ qaado oo kariimka yicib.
Ka dib, waan kulaylineynaa oo karkarnaa. Marka karkari waxaan ku karineynaa kuleyl dhexdhexaad ah / hooseeya muddo siddeed daqiiqo ah, oo marba marka ka dambaysa ku kharribaysa. Haddii aan jeclaanno boorashka oo ka fudud, waxaan ku shubnaa waxoogaa caano ah.
Sideed daqiiqo kadib waxaan u adeegnaa boorashka oo leh nuskii kale oo moos ah, la jarjaray oo la dubay, xoogaa shukulaato iyo qorfe qorfe ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Cunto gaar ah » Cunnooyinka fudud » Mooska boorashka boorashka leh kareemka yicib
Greek moussaka: cunto karis dhaqameed